के शाहरुख खानका छोरा फिल्ममा आउन चाहाँँन्छन् त? | नेपाली पब्लिक के शाहरुख खानका छोरा फिल्ममा आउन चाहाँँन्छन् त? | नेपाली पब्लिक
के शाहरुख खानका छोरा फिल्ममा आउन चाहाँँन्छन् त?
अमेरिकाको साउदर्न क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय पढेका आर्यन खासै चर्चामा आउँदैनन्।
नेपाली पब्लिक २०७६, १५ कार्तिक शुक्रबार १०:४०
एजेन्सी–बलिउड सुपरस्टार शाहरूख खानले आफ्ना छोरा आर्यन फिल्म क्षेत्रमा नआउने बताएका छन्। नेटफ्लिक्सका लागि डेभिड लेटरम्यानलाई दिएको अन्तर्वार्तामा शाहरूखले आर्यन अभिनेता बन्न नचाहेको जानकारी दिएका हुन्।
उनले भने ’मेरो छोरो अभिनय गर्न चाहँदैन। र मलाई पनि उसले अभिनय गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन,’ शाहरूखले भनेका छन्, ’हाम्रो देशमा अभिनेताको छोरा अभिनेता नै बनोस् वा बन्छ भन्ने आशा गरिन्छ। आर्यन अग्लो छ, राम्रो पनि छ। तर ऊ कलाकार बन्दैन जस्तो लाग्छ। बरू ऊ राम्रो लेखक हो, लेखक बन्न सक्छ।’ किनकि उसमा त्यो क्षमता छ।
अन्तर्वार्तामा शाहरूखले भनेअनुसार आर्यनले नै उनलाई आएर ’म अभिनय रूचाउँदिन होला’ भनेका थिए। शाहरूखलाई पनि यो कुरा व्यवहारिक लागेको थियो।
शाहरूखले आर्यनको भनाइ सुनाएः ’म अभिनेता बनेँ भने हरेकपटक मेरो तपाईंसँगै तुलना हुन्छ। राम्रो गरेँ भने मेरो सीप वा कलाले भन्दा पनि तपाईंको छोरा भएकाले यो त भइहाल्छ नि भन्दिन्छन्। नराम्रो गरेँ भने, बाबु यति राम्रो कलाकार, छोरा भने यस्तो भनेर मलाई हेपिन्छ। यो बलिउडमा के गरिराछ र भनिन्छ। मेरो आफ्नो पहिचान नै नहुने अवस्थामा म बस्न सक्दिनँ। त्यसैले म अभिनय गर्न चाहदिनँ।’
२१ वर्षीय आर्यन शाहरूखका जेठा सन्तान हुन्। अमेरिकाको साउदर्न क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय पढेका आर्यन खासै चर्चामा आउँदैनन्। तर केही समयअघि रिलिज भएको अमेरिकी फिल्म ’द लायन किङ’ को हिन्दी संस्करणमा उनले शाहरूखसँगै काम गरेका थिए। फिल्ममा शाहरूले मुफासाको आवाज भरेका थिए भने आर्यनले सिम्बाको।
त्यस्तै सन् २००४ को ’द इन्क्रेडिबल्स’को हिन्दी संस्करण ’हम है लाजवाब’मा पनि शाहरूखसँगै आर्यनले आवाज दिएका थिए। फिल्म ’कभी खुसी कभी गम’मा आर्यन शाहरूखकै सानो छँदाको छोटो भूमिकामा देखिएका थिए।
शाहरूख जस्तै देखिने आर्यन बुबा झैं फिल्ममा चम्किने धेरैको अन्दाज वा अपेक्षा छ। तर शाहरूखले भनेका यी कुराले आर्यन अभिनेता बन्ने सम्भावना कम देखिएको छ। बलिउडको पुरानो ट्रेन्ड हेर्ने हो भने सुपरस्टारका छोराछोरी प्रायः अभिनयमा सफल भएका छैनन्। किनभने दर्शकहरुले बुवा आमाकै नामबाट उनीहरुलाई बढी चिनीरहेका छन्।
यस्तै असफल ’स्टार किड्स’ का उदाहरण अरू पनि छन्। बलिउडकै पहिलो सुपरस्टार मानिने राजेश खन्नाकी छोरी ट्विंकल खन्ना फिल्ममा जम्न सकिनन्। उनी अहिले लेखकका रूपमा चिनिएकी छन्। जितेन्द्रका छोरा तुषार कपुर पनि अभिनयमा असफल छन्।
शाहरूखकी छोरी तथा आर्यनकी बहिनी सुहाना खान भने फिल्म क्षेत्रमै आउने तयारी गरिरहेकी छन्। उनले आफ्ना साथीको छोटो फिल्ममा अभिनय समेत गरिसकेकी छन् भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा पनि बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छिन्। तर उनी पनि तत्कालै भने बलिउडमा देखिने छैनन्। शाहरूखका अनुसार सुहाना न्युयोर्क विश्वविद्यालय पढ्न गएकी छन्। उनी यो क्षेत्रमा काम गर्छिन् भन्ने धेरैको अनुमान छ।